Accueil » Onjam-piainana » Sady mamorona no mitantana orinasa i Mialy
Teo amin’ny faha-fito ambiny folon-taonany i Mialy dia efa nahatsangana orinasa ho azy manokana. Tovovavy vao 20 taona izy dia efa mitantana sahady ny orinasany, « Mialy Créa » etsy Antsakaviro.
Fony faha­keliny izy dia efa tia mikirakira ny tontolon’ny sary, izay nohamafisina tamin’ny fianarana izay tontolo mahakasika izany.
Teny amin’ny lisea izy no nanomboka nampiasa ny « art plastique » izay anisan’ ny taranja, ihany koa, tao am-pianarana. Ny andro nandraisana ny fanamafisany ny finoany no nandrafetany an’asa voalohany ireo fahalalany mikasika ny sary. Niezaka nampihaingo ny efitrano nanatontosana ny lanonana tamin’io andro io ihany koa izy sy ny reniny.
Ny taona 2013, teo amin’ny faha-fito ambiny folon-taonany, no nahazoany ny mari-pahaizana bakalorea frantsay misahana ny toe-karena sy ny sosialy. Teo no nanombohany ity orinasa keliny ity satria dia nahazo doka sy fampirisihana maro avy amin’ny fianakaviana sy ireo namany izy, tamin’ny fahombiazany tamin’ilay lanonana kely notanterahiny. Iny taona iny ihany koa anefa no nialany teto an-tanindrazana mba handranto fianarana any am-pita mikasika ny « Lalàna sy ny fitantanana », ary napetrany teo ambany fitantanan’ny ray aman- dreniny ilay orinasany. Kinanjo teny antsefatsefan’ny taom-pianarana dia niala izy ka nitady fianarana momba ny « art plastique» izay nimasoany tanteraka.
Herintaona taty aoriana, vita ny fianarany ary niverina teto Madagasikara izy sady nitondra fanavaozana ho an’ny orinasany. Nanom­boka teo dia nifantoka tanteraka tamin’ity orinasany ity i Mialy. Miezaka mitady zava-baovao isan’andro izy, mba hanatsara hatrany ny asany sy hanome fahafaham-po feno ireo mpanjifany.
Misy fotoana izy mamorona ireo haingo an-tsehatra maro isan-karazany. Indraindray koa anefa dia tsy maintsy mandeha any am-pitan-dranomasina izy, mividy ireo akora ilaina eo amin’ny fanaingoana sy ireo pitsopitsony rehetra ilaina rehefa misy fety aman-danonana karakaraina.
Vavitokana sady voalohan-teraka teo anivon’ny ankohonana misy azy i Mialy. Azo lazaina fa olona manan-katao ny ray aman-dreniny. Tsy nihanona teo amin’ny fananan’ireto farany anefa izy fa niezaka nitady ny ho azy manokana. Tovovavy matotra sy hentitra eo amin’ny sehatry ny asa izy, tsy arakaraka ny taonany. Noho ny asa ataon’ireo ray aman-dreniny eo amin’ny sehatry ny fandraharahana dia tsy nampananosarotra an’i Mialy ny nirotsaka tamin’izany
sehatra izany koa. « efa niaina tamin’ny varotra sy ny fandraharahana aho, nieritreritra ihany ny hitantana orinasa fa tsy nisaina hoe orinasako manokana fa hoe handova nyan’i dada sy neny. Noho ny fahombiazana kely tsikaritr’ireo namana tamin’ilay lanonana kely tamin’ny « confirmation »-ko anefa dia tonga tao an-tsaina hoe maninona tokoa moa raha manangana orinasa misahana ny fety aman-danonana. Teo dia nanampy ahy manokana ny ray aman-dreniko na ara-tsaina na ara-bola indrindra indrindra », hoy izy raha nanazava ireo dingana nolalovany teo am-panantontosana ity orinasany. Misy fito ireo mpiasa ao amin’ny « Mialy Créa » ankehitriny.
Tsy mijanona eo amin’ny fitantanana orinasa anefa i Mialy fa mbola manohy fianarana mikasika ny « architecture » sy « management » mba hampitombo ny fahalalany sy hanatsarana hatrany ireo vokatra atolony ireo mpankafy sy mpanjifa izany.
Les concours de Douanes fortement contrôlés.